गोरे पत्नी र सञ्जेल टेलिफोन संवादः मामा, यो पालि जसरी पनि बचाइदिनुस्
काठमाडौं । सुनकाण्डका मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । सुरुमा फरार रहेका उनी ११ जेठमा पक्राउ परेका थिए ।
उनले सुन तस्करी गरेको मात्र होइन, त्यसमा एसएसपी श्याम खत्रीको संलग्नता स्वीकार गरे पनि अपराध महाशाखाबाट गएको प्रहरी टोलीलाई पोलेका छैनन । जबकी गोरेको समूहबाट हत्या गरिएका सनम शाक्यको शव व्यवस्थापनका लागि महाशाखाको टोली गएको बयान टेकराज मल्ललगायतले दिएका छन् ।
महाशाखाको टोलीले शनमको शव मोरङ प्रहरीलाई बुझाएपछि पनि गोरे र उनको परिवारसँग संवाद गरेको पाइएको छ । जसमा महानगरीय अपराध महाशाखाका सई बालकृष्ण सञ्जेलले गोरेकी पत्नी नर्वदा खरेलसँग झण्डै २० मिनेट कुराकानी गरेका छन् ।
यसमा सञ्जेलले आफूहरुले गोरेलाई बचाउन खोजेको तर, उनी अन्तिम समयमा भागेर कुरा बिगि्रएको बताएका छन् । नर्वदाले भने मामाको नाता लगाउँदै यो पटक गोरेलाई जसरी पनि बचाई दिनुपर्‍यो भन्दै हार गुहार गरेकी छन् ।
यस्तो छ सम्वादः
सञ्जेलः अब म भन्दिन्छु है । मान्छे मरिसक्यो । भाञ्जाले मान्छे लगाएर मार्‍यो । भाञ्जाले मलाई ढाँटे । के ढाँटेभन्दा इन्डियनहरु भने । ल ठीक छ । मैले त्यो पनि मिलाइदिएँ । अनि, भाञ्जा कमसेकम यहाँ आइदिएको भए हुन्थ्यो । मैले डीएसपी सा’ब लिएर आएको थिएँ ।
नत्र, मैले जिन्दगीमा पैसाको कुरा पनि गर्दिन । डीएसपीसँग कुरा गरेको थिएँ, त्यो पनि अहिलेलाई ठीक छ भन्दिएको थिएँ । तर, के हो भने यहाँ आउँछु भनेर नआउँदा त मैले सेटिङ गरेर भाञ्जालाई भगाइदिएको जस्तो भयो नि त । मेरो भाञ्जाले भेट्छ । सिग्नेचर गर्दिन्छ । कोको मान्छे हो, सही छाप गर्दिन्छ । एक जनाले स्वीकार गर्दिन्छ । त्यो चाहिँ जसरी पनि मिलाउनु पर्ने भयो । भाञ्जाले होइन…
सञ्जेलः हो… हो .. हो.. त्यो चाहिँ हो ।
गोरे पत्नीः भाञ्जा एकछिन अर्कातिर गएको बेलामा खुरापाती गरेर मारेछन् क्या मनेहरु नै । मने एक शब्द पनि नरोएको रे । खासमा उसैले मारेको हो । भाञ्जाले त्यसरी ज्यान पनि लिँदैनन् । भाञ्जा त्यस्तो मान्छे पनि होइनन् । तपाइँलाई पनि थाहा छ होइन ?
सञ्जेलः सुन्नु न भाञ्जी मैले नसक्ने कुरा…
गोरे पत्नीः होइन.. फसाका हुन् क्या । ट्वाइलेट जान पनि उनीहरु गोरेको पैसाले … । घुमाउन पनि गोरेको पैसाले घुमाउँथे ।
गोरे पत्नीः होइन मामा डर एकदमै छ उसलाई । तर, अब मैले केटाहरुलाई माया गरेर राखेको छ । हामी सबै साथमा छौं भनेर हिँड्छ । अनि, त्यो अनुसारले केटाहरुले उसलाई झन् विश्वासै गर्दैनन् क्या । झन् एकदम डुबाउन खोजेका छन् । त्यो मने त मान्छे …..हो खासमा ।
तपाईँलाई मिलाउँछु भनेर तपाइर्ँले कसरी मिलाउनु हुन्छ ? मिलाए पनि भरे त के गर्नु हुन्छ ? हामीलाई समातेपछि हामीलाई छोड्दैन । त्यसो भयो भने हामी पनि छोड्दैनौं । उनीहरु दुईटा पनि फटाहा हो मान्छे ।
गोरे पत्नीः १५/१६ करोड आउने भन्यो भन्ने भयो
दुई/सात महिना बस्थे । अर्कोले खान लागाउन पाएकै रैछ । दिएकै रैछ भान्जाले । अब के छ भन्नु हुन्छ भने सबै मले र उसले खाए । यता र उता गरे, मान्छे पनि मारे । अनि, भाञ्जालाई ठिक्क पारेर हुन्छ हामी मिल्छौं भने । उता, सबै हल्ला गरे । सबै विगारे ।
गोरे पत्नीः घरमा त्यसकी बुढीले मामा मलाई कल गरेको गर्‍यैं छ । मामा म के भन्नु ? के जवाफ दिनु ? खासमा त्यसको बुढीलाई पनि थाहा छ । मनेको बुढीलाई पनि सबै कुरा थाहा छ ।
गोरे पत्नीः थाहा छ होला नि । नत्र कसरी त्यस्तो सेटिङहरु …
त्यो मेरो घरदेखि अलिकति नजिकै बस्नु हुँदो रैछ होइन तपाइर्ँहरु ? त्यतै खोई कहाँ । मैले त देखेको छैन फेरि कहाँनेरि । अनि मलाई भेटे त्यहाँ । झ्याप्पै अंगालो मारे । अनि, मामा घटाएछौं ज्यान भने । भाञ्जा बिर्सिएर पनि जति गर्‍यौं.. गर्‍यौं । अब जिन्दगीमा यो काम भनेर नगर तिमी फस्छौं । कसरी फस्छु मामा ? म यहाँ गर्दिन इन्डियातिर ।
सञ्जेलः मलाई त कति चाहियो.. के चाहियो भन्थ्यो ? कति चाहियो मामा भन्थ्यो । मैले कहिल्यै पनि पैसाको कुरा गर्‍यौं भने तिम्रो र मेरो सम्बन्ध रहँदैन भनेको थिएँ । तिमी हामी एकैठाउँको मान्छे हो । यहीँ आएर चिनजान भयो । तिमी पनि पुलिसको छोरा हो ।
सञ्जेलः अनि, भाञ्जाले त मलाई तीन/४ जना इन्डियनहरु आएर भन्थें । मिलाउन भन्थे । यहाँ आउँदा ड्राइभरले एउटा भन्छ । दुईटाले दुई वटा थोक भन्छ । अर्को एउटा भागेको छ रे । अर्को नि को मरेको छ रे भनेको सुन्दैछु ।
सञ्जेलः मलाई त धोका दिइसक्यो त । मलाई के भन्यो भने होइन के गर्ने हो ? भनेको । तपाईंसँग कुरा भएको छ रे । बचाउनु पर्‍यो भन्यो । ल.. बसौं न त कुरा गरौं न त मिलाएर भन्दा खेरि होइन, तपाईंले कसरी बचाउनु हुन्छ ।
सञ्जेलः अँ.. मनेहरु पनि हाम्रो मन चोरेर गरिरहेका थिएँ । अनि, उनीहरु उपि|mएपछि हामीले पनि सालेहरु भनेर लगेर थुन्न पठाइदिएको छ । हामीले सबै गर्न मिल्दैन । के के हो त्यहाँको पुलिसले हेर्छ ।
मैले जिन्दगीमा पैसाको कुरा गर्‍यौं, पैसामा जोख्यौं किन्यौं भने चाहिँ मामा भाञ्जाको सम्बन्ध रहँदैन भनेको थिएँ । मलाई भेट्दै पिच्छे त्यसो भन्थ्यो । उसको मन चाहिँ त्यस्तो छ क्या । जसलाई पनि भन्ने ।
तर, मैले कहिल्यै पनि भनिन । यो केसमा पनि सरले तुरुन्त ले म मिलाइदिन्छु भन्नुभएको थियो । तर, मैले सर जे भए पनि मेरो साथी हो । पछि हेर्दिन्छ । यो केस चाहिँ मिलाउनुपर्‍यो भनेको थिएँ । तर, बस भनेको सट्ट हिँडे भाञ्जा ।
मैले त धोका दिने भए त भाञ्जाले मामा केही समस्या पर्‍यो भने भाञ्जीले हेर्दिन् है भनेको थियो । मैले सेभ पनि गरेर राखेको थिएँ । छ नि होइन, तपाईँसँग पनि मेरो नम्बर । धर्म मामाहरुको पनि मसँग राम्रो मामाले भनेर हो । नत्र त पहिलो हाम्रो पनि राम्रो थिएन नि त ।
सुरुमा तलाईँ हान्छ मार्दिन्छ । कहाँ दुबईतिर हो । कहाँ कहाँ हो । मार्छ ऊ गर्छले भन्दा सुरुमै मैले त्यसो भए सम्बन्ध हुँदैन भनेको थिएँ । त्यसपछि हाम्रो सम्बन्ध भएको हो । अब नगर है यस्तो भनेको थिएँ । क्रसर किने भन्दै थियो । किनेको हो ? टि्रपर, डोजरहरु किनेको थिएँ भन्दै थियो ।
गोरे पत्नी: किन्ने चाहिँ भनेको थियो । तर, किनिसकेको त छैन होला । मलाई त खई थाहा छैन ।
सञ्जेलः अनि, दुबईमा के खोलेको थियो अरे । त्यसको पनि ऋण छ अरे । ५० पटक राम्रो गरेको छ भने पनि ५१ पटकमा धोका दिन्छन् । यस्ता यस्ता साथीहरु छन् । अनि, कुरा विगि्रन्छ । ल भाञ्जाले फोन गरे पनि मलाई फोन गर्नु रे भन्दिनु नि है ।
गोरे पत्नी : हुन्छ हस् । ल ।